Hoggaamiyaha Myanmar oo difaacday xarigga wariyeyaasha Reuters - Halbeeg News
NAYPYIDAW (HALBEEG) – Hoggaamiyaha dalka Myanmar, haweenayda lagu magacaabo Aung San Suu Kyi, ayaa difaacday xarigga ay ciidamada dalkaasi u gaysteen labo wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters.
Kyi ayaa sheegtay in labada wariye oo lagu kala magacaabo Wa Lone iyo Kyaw Soe xarriggoodu yahay mid sharciga waafaqsan, maadaama sida ay sheegtay ay ku xadgudbeen shuruucda dalka Myanmar.
Hooggaamiyaha Myanmar ayaa sidoo kale sheegtay in arrintani haba yaraatee wax xiriir ah la lahayn xorriyatul qowlka iyo caburinta saxaafadda.
Labada wariye ayaa bishan September 3deedii waxaa lagu xukumay midkiiba 7 sano oo xarig ah, kaddib markii lagu soo eedeeyey jaasuusnimo iyo inay ku xadgudbeen sharciga siraha ee dalka Myanmar.
Wa Lone iyo Kyaw Soe waxaa gacanta lagu dhigay iyaga oo sita dukumiintiyo sir ah oo ay sarkaal booliska ka tirsan ka heleen, kuwaas oo muujinaya tacaddiyada ay ciidamada Myanmar u geysteen dadka ku abtirsada qowmiyadda Rohingya.
Hadalka Aung San Suu Kyi ayaa imaanaya toddobaadyo kaddib markii Guddoomiyaha Guddiga Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobey, Zaayid Racad Al xuseyn uu ugu baaqay in ay xilka hayso iska casisho.
Racad ayaa baaqiisa u sababeeyay inay khalad ahayd in hoggaamiyaha Myanmar ay taageero u muujiso gaboodfallada ay ciidamada milateriga ee dalkaasi kula kaceen dadka laga tirada badan yahay ee Rohingya.